बाबुराम भट्टराई : आफ्नै नेताले २० अर्ब खाएको भएरै मैले माओवादी पार्टी त्याग गरे आखिर को (भिडियो सहित) – Simple Khabar
तत्कालीन माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीका लडाकुका निम्ति राज्यबाट गएको करिब २० अर्ब रकम भ्रष्टाचार गरेको डा. भट्टराईको गम्भीर आरोप छ ।
प्रचण्डले सो रकम पचाउनका लागि विदेशी प्रभु गुहारेको आरोपसमेत भट्टराईले लगाएका छन् । यसैगरी, प्रचण्डले ७०० हतियार विदेशी दलाललाई बेच्न लागेको, तर आफूले सो हुन नदिएकोसमेत डा. भट्टराईले खुलासा गरेका छन् ।
लामो समयसम्म प्रचण्डसँग सहकार्य गरेका र मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘एकजना पूर्वमाओवादी’को सामान्य आक्रोशका रूपमा मात्रै लिनु किमार्थ उचित हुँदैन ।
कुनै सामान्य लडाकु वा कार्यकर्ताले लगाएको आरोप थियो भने त्यसलाई आक्रोशको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईजत्तिको ‘हेभीवेट’बाट आएको अभिव्यक्तिलाई आमसर्वसाधारणले कुन रूपमा बुझ्ने ?
यसअघि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई पत्याउने हो भने उनी कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालापछिका गरिब प्रधानमन्त्रीमा पर्छन् ।
त्यसवेला बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा प्रचण्डले श्रीमती सीता दाहालका नाममा चितवनमा एक कट्ठा जमीन र तीन तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका थिए । सो सम्पत्ति पनि उनको स्वआर्जन नभएर पैतृक भनिएको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: विद्यार्थीले परीक्षामा चिट चोर्न यतिसम्म गरिन, शिक्षक नै अचम्ममा
NEXT POST Next post: गोलीकाण्डमा कम्तीमा 40 को मृत्यु, आक्रमणकारीले शेयर गरे डरलाग्दो भिडियो –
श्रीमतीलाइ केटासंग नग्न अवस्थामा भेट्दा केटाकै अगाडी दुबैलाई नांगै बनाएर एसरी गरे राम धुलाई (भिडियोसहित) (12,315)
विदेश जाने क्रममा श्रीमतीले चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति गर्न दिए यस्तो उपहार (9,323)
कतै हजुर पनि पर्नुभयो कि ?चाहेर मात्रै धनी बन्न सकिँदैन,यी ४ राशी हुने व्यक्ति सबैभन्दा धनी हुन्छन् !जानी राखौ (5,835)
यस्तो रहेछ राधिकाले गाई काट्न पाउनु पर्छ भन्नुको कारण (5,742)
खाडीमा घरेलु महिला हरुलाई आफ्नो मालिक बाट यस्तो बलात्कारको सिकार हेर्नुस् भिडियो सेयर गरि सहयोग गरौं (3,852)